Saturday March 28, 2020 - 07:07:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dhimashadii ugu badneed ayuu shalay Cudurka Carona Virus ka geystay wadanka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda America taas oo ka dhigan in Mareykanku yahay dalka koowaad ee qaaraddan ugu dhiban caabuqa Covid19.
Wararka ka imaanaya magaalada Washington ayaa sheegaya in xalay oo kaliya uu Carona Virus soo ritay dad ka badan 18 Kun qof American ah waxayna tirada dadka Carona labuka ee Americanka ah kor udhaaftay 100 kun oo qof.
Tirakoob rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in shalay oo Jimco aheyd uu Carona haleelay 18,000 qof American ah, sidoo kale dhimashada ayaa shalay gaartay 345 qof.
Dowladda Mareykanka waxay ka gaabsanaysaa ka hadalka dadka Carona ugu dhimanaya wadankeeda balse jaamacad lagu barto cilmiga caafimaadka oo lagu magacaabo Johns Hopkins ayaa warbaahinta usoo gudbinaysa tirada dhimashada Carona ee Mareykanka.
Jaamacadda ayaa shalay sheegtay in tirada guud ee dadka Americanka ah ee Carona udhintay ay kor udhaafeen 1438 qof.
hay'adda WHO waxay sheegtay in Mareykanku uu noqday dalka koowaad ee ladhiban Carona caalami ahaan kaalinta koowaad waxaa kujira Shiinaha Sedaxaadna dalalka Spain iyo Talyaaniga marka laga hadlayo dadka uu soo ritay caabuqa Covid19.